အပြောနှင့် အကြား - Myanmar Network
Posted by Kyaw Win Tun on April 23, 2012 at 11:49 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စာ စကားစွမ်းရည်ဆိုင်ရာ TOEFL IELTS စသည့် စာမေးပွဲများတွင် အပြောနှင့် အကြားစွမ်း ရည်ကို တစ်ခုစီ စစ်ဆေးသော်လည်း လက်တွေ့ တွင်မူ အပြောသည် အကြားနှင့် တစ်ပြိုင်နက်သုံးရ သည့် စွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည်။
စကားပြောရာတွင် နားမထောင်ဘဲ ပြောမရပါ။ သူတစ်ပါးပြောသည်ကို နားမလည်ဘဲနှင့်လည်း ပြန် ပြော၍မရပါ။ ထို့ ကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာ စကား လေ့ကျင့်ရာတွင် အကြားစွမ်းရည်ကို များများလေ့ကျင့် ထားပါက အပြောစွမ်း ရည် အတွက်ပါအထောက်အကူရပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သို့ ရာတွင် အပြောအ တွက် အသုံးဝင်ရန် ဘယ်လိုနားထောင်ရမလဲဆိုသည်ကို သိထားဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။
အခြေခံအဆင့် အပြောအတွက် နေ့ စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားကို များများ စ နားထောင်သင့်သည်။ တစ်ကြောင်းခြင်း၏ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကို သိရန်ကြိုးစားခြင်းထက် ပြောသည့် အခြေအနေကို သိ အောင်ပထမအားထုတ်သင့်သည်။ သို့ မှသာ ထိုပြောစကားတစ်ကြောင်းစီ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည် ပြီး ပြန်သုံးတတ်ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ Good Evening Good Night ဆိုသည့်စကားစုများကို လူတိုင်း နားလည်ပါလိမ့်မည်။ တိုက်ရိုက် အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်း သိပါလိမ့်မည်။
သို့ သော် ထိုတိုက်ရိုက် အဓိပ္ပာယ် နှင့် ညနေမှောင်သွားသောအခါ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တွေ တွေ့ ချင်းGood Night ဟု သွားနှုတ် ဆက်၍ မရပါ။ Good Evening ဟုသာနှုတ်ဆက်ရပါလိမ့်မည်။
ဤသည်မှာ စကားပြောနှင့် အတူပါလာသည့် မည်သည့် ဘာသာစကားတွင်မဆိုရှိသည့် မိခင်ဘာသာ စကားပြောသူများ၏ သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်သွားပြောင်း၍မရပါ။ ညနေမှမဟုတ်တာ။တွေ့ တဲ့အချိန်က ည ရောက်နေလို့ တွေ့ တွေ့ ချင်း Good Night ပဲပြောမယ်ဟု ဆိုကာ စောဒကတက်၍မရပါ။ ထို့ ကြောင့် စကားပြောခန်းအမျိုးမျိုးကို နားထောင်ထားသင့်သည်။ ထိုစကားပြောခန်းများတွင်ပါသည့် ခဏခဏကြားရသော စကားစုများကို ယဉ်ပါးနေအောင် ပြန်သုံးနိုင်အောင် လေ့ကျင့်ထားသင့်သည်။
ဥပမာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးတွေ့ လျင် How are you? How do you do? ကို အမြဲလိုလိုကြားရသောအ ခါ သြော် နှုတ်ဆက်လျင်ထိုစကားစုကို သုံးသည်ဆိုသည်ကို မှတ်ထားသင့်သည်။ ထိုသို့သော ခြေ အနေအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် စကားစုများကို နားထောင်လေ့ကျင်ဖို့ ရန် သင်ခန်းစာ စာအုပ် တိပ်ခွေများရှိပါသည်။ အင်တာနက်တွင်လည်းရှာနိုင်ပါသည်။ http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/howto/in...
စာအုပ်ချည်းပဲဖတ်ကာ မလေ့လာသင့်ပါ။ စာအုပ်နှင့်တိပ်ခွေ သို့ မဟုတ် အင်တာနက်တွင်လည်း နား ထောင်လို့ ရသည့် စာအိမ်မျိုးကိုရှာထားသင့်ပါသည်။ သို့ မှသာ လေယူလေသိမ်းကို ပါသိပါလိမ့်မည်။ accent ကို မဆိုလိုပါ။ intonation အသံအနိမ့်အမြင့်ကို ဆိုလိုပါသည်။ ဥပမာ Good Morining ကို ပင် စတင်နှုတ်ဆက်သူနှင့် ပြန်လည်နှုတ်ဆက်သူ အသံအနိမ့်အမြင့်မတူပါ။ အရင် ဆောင်းပါးများတွင် ပြောခဲ့သည့် ၀ါကျ ဖိသံနှင့်လည်းဆိုင်ပါသည်။ နားထောင်ရင်းလည်းလိုက်ရွတ်ဆိုသင့်ပါသည်။
ထိုစကားစုများအပြင် အပြောအတွက်သိထားသင့်သည့် သီးသန့် စကားလုံးများလည်းရှိပါသေးသည်။ cool wow စသည့် စကားလုံးများဖြစ်သည်။ ဘယ်အချိန်တွင်သုံးသလဲ။ သတိပြုလေ့လာသင့်ပါသည်။ ရုပ်ပုံပါမြင်ရသည့် ဗီဒီယို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခန်းစာမျိုးဆိုလျင် လေ့လာရပိုလွယ်ကူပါသည်။ Family Album USA စသည့် ဒီဗီဒီများ၊ FOLLOW ME စသည့် ကွန်ပျူတာ စီဒီများကို လေ့လာသင့်ပါသည်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်လျင်လည်း ကောင်းပါသည်။
အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါလေ့လာနေလျင်လည်း အပြောအတွက် အသုံးဝင်မည့် သဒ္ဒါပုံစံများကို ဦးစားပေးလေ့ လာသင့်ပါသည်။ တစ်ဘက်ကပြန်ပြောလျင် သဒ္ဒါပုံစံတစ်ခုစီကိုလည်း ဘယ်နေရာမှာသုံးသလဲဆို သည်ကို သိအောင်အားထုတ်သင့်ပါသည်။ ပုံစံကိုသာ တည်ဆောက်တတ်သည့် အဆင့်ြ့ဖစ်သော စာအုပ်ပေါ်တွင် လေ့ကျင့်ခန်းများစွာလုပ်ပြီး ရပ်မနေသင့်ပါ။ ဥပမာ Let’s read ဆိုပါစို့ ။ Let us (verb) ,Let me (v), Let him (v)စသည်ဖြင့် ပြောလို့ ရသည်ကိုသိသည့် အဆင့်ဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ ဘယ်အ ခြေ အ နေ မျိုးတွင်သုံးသလဲ ဆိုသည်ကိုသိရပါမည်။ ပြန်လည်းပြောဆိုသုံး ဖူးရပါမည်။
တစ်ယောက်တည်း ဖတ်လိုက် နားထောင်လိုက် လိုက်ဆိုလိုက်၊ ကြည့်လိုက် လေ့လာလိုက် ပြော နိုင်ပြီလားမေးလျင် လုံးဝ မပြောနိုင်သေးပါဟုဆိုရပါမည်။ စကားပြောရသည့် အခြေအနေ အမျိုး မျိုး တွင် ကိုယ်တိုင် ထိုစကားစုများ ၀ါကျများကို သုံးမှသာ တကယ်ပြောနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပြောနိုင်မည့် နေရာ၊ သင်တန်း၊ သူငယ်ချင်းများကိုရှာထားသင့်ပါသည်။ ထို့ နောက် ပုံမှန်တွေ့ ပြီး ပြောသင့်ပါသည်။
မေးစရာရှိလာပါသည်။ အမြဲလိုလိုတွေ့ ၊ အင်္ဂလိပ်လိုပြော။ တစ်နေ့ လည်း နှုတ်ဆက်၊ နေကောင်းလား မေး၊ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က ဘာလုပ်လဲမေး၊ ပြီးပြန်။ ထိုသို့ ဆိုလျင်လည်း အခြေအနေ တစ်မျိုးနှစ် မျိုးလောက်ကိုသာ ကျွမ်းပါလိမ့်မည်။ ဆုံတိုင်းဆုံတိုင်း ပြောဆိုစရာ ခေါင်းစဉ်တစ်မျိုးမျိုးရှာထား သင့်ပါသည်။ သို့ မဟုတ် မြန်မာ စာအုပ်ဖြစ်စေ၊ အင်္ဂလိပ် အလွယ်ဖတ်စာအုပ်ဖြစ်စေ တစ်အုပ်အုပ်ကို ဆွေးနွေးသင့်ကြပါသည်။ ထိုအခါ ကိုယ်ကြားဖူးထားသည့် မေးခွန်းမေးပုံမေးနည်း၊ ဖြေပုံဖြေနည်းစ သည့် အခြေအနေမျိုးစုံနှင့် ဆိုင်သည့် စကားစုမျာကိုလည်း ပြန်သုံးပြီသားဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ Fluency ဟု ဆိုသော နှုတ်သွက်လျာသွက်မှု အတွက်လည်းလေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
Permalink Reply by Zaw Win on April 23, 2012 at 15:53
That's very precious for us.
Permalink Reply by 10vv497ba1oz2 on April 25, 2012 at 10:51
Permalink Reply by win win shwe on April 25, 2012 at 11:24
Permalink Reply by hla hla aye on April 25, 2012 at 11:52
this is really kind of you.Thank you so much.
Permalink Reply by Ratan Biswas on April 25, 2012 at 14:43
Permalink Reply by 082cdfx92gpcx on April 26, 2012 at 17:07
Permalink Reply by Tiffany on May 2, 2012 at 17:32
Thank you very much , teacher . I like your post .
Permalink Reply by tuaungsan on May 5, 2012 at 9:41
thanksalot . we need to know it. Thanks !